Remember (မြန်မာစာတန်းထိုး) – Gold Channel Movies
Dec. 09, 2015 SBS
1Season 1 Dec. 09, 2015
Episode 1 Dec. 09, 2015
Episode2Dec. 10, 2015
Episode3Dec. 16, 2015
Episode4Dec. 17, 2015
Episode5Dec. 23, 2015
Episode6Dec. 24, 2015
Episode7Jan. 06, 2016
Episode 8 Jan. 07, 2016
Episode9Jan. 13, 2016
Episode 10 Jan. 14, 2016
Episode 11 Jan. 20, 2016
Episode 12 Jan. 21, 2016
Episode 13 Jan. 27, 2016
Episode 14 Jan. 28, 2016
Episode 15 Feb. 03, 2016
Episode 16 Feb. 04, 2016
Episode 17 Feb. 10, 2016
Episode 18 Feb. 11, 2016
Episode 19 Feb. 17, 2016
Episode 20 Feb. 18, 2016
Prosecutor Hong Moo-Suk
Review မရေးခင် ပထမဆုံး ပြောချင်တာက ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် တစ်ရှုးလေးဖြစ်ဖြစ် လက်ကိုင်ပုဝါလေးဖြစ်ဖြစ် ဆောင်ထားကြဖို့ပါ :3
မျက်ရည်ပေါက်ပေါက် ကျရမယ့် ကားလေးမို့ပါနော်
ဇာတ်လမ်းအညွှန်း ရေးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဆောဂျင်ဝူးဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ အင်မတန်မှ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းပြီး တစ်ခါမြင်လိုက်ရုံနဲ့ အားလုံးကို ခရေစေ့တွင်းကျ မှတ်မိနိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပါရမီရှင် အထက်တန်းကျောင်းသားလေးပါ။အဖေတစ်ခု သားတစ်ခုဘဝနဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ငဲ့ညှာပြီး အင်မတန်မှ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်ရင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လောကဓံဆိုတာကလဲ အမြဲတမ်း မျက်နှာသာ မပေးတတ်ပါဘူး။အကောင်းနဲ့အဆိုး ဒွန်တွဲနေတယ်ဆိုတာကို တစ်နေ့မှာတော့ သူ လက်တွေ့ ကြုံလိုက်ရပါတော့တယ်။သားအဖနှစ်ယောက်ရဲ့ သီရိဂေဟာလေးကို ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ မုန်တိုင်းကတော့ ဖခင် ဆောဂျေယော့တစ်ယောက် လူသတ်မှုနဲ့ မှားယွင်း အဖမ်းခံလိုက်ရခြင်းပါပဲ။ဒါ့အပြင် ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာတဲ့ အဖြစ်တစ်ခုကတော့ ဆောဂျေယော့ဟာ တစ်စတစ်စနဲ့ အယ်ဇိုင်းမားလ် ဖြစ်လာခဲ့တာမို့ ဘာကိုမှ မမှတ်မိနိုင်တော့ပါဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာ ဆောဂျင်ဝူးတစ်ယောက် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ကဲ့ရဲ့မှုဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်း အဖေဖြစ်သူကို ရတဲ့နည်းနဲ့ ကယ်ဖို့ ကြိုစားခဲ့ပါတယ်။သူ့အဖေကို လူသတ်တရားခံလို့ အားလုံးက ဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြီး ရှောင်ဖယ်နေချိန်မှာ ဘေးကနေ ကူညီနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့သူကတော့ ဥပဒေကျောင်းသူလေး အင်အာပါ။သူတို့နှစ်ယောက် ပေါင်းပြီး ဆောဂျေယော့မှာ အပြစ်မရှိကြောင်း သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားကြပါရော။
ဒါပေမယ့် ” Money can make everything ” ဆိုတဲ့အတိုင်း လူသတ်တရားခံအစစ်ဖြစ်သူက ငွေနဲ့ အရာရာကို လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီမှာတင် ငွေကြေးနဲ့ အာဏာဒဏ်ကို အလူးအလှိမ့်ခံစားလိုက်ရတဲ့ ဆောဂျင်ဝူးတစ်ယောက် စိတ်အနာကြီးနာပြီး အားလုံးရဲ့မျက်စိရှေ့ကနေ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။လေးနှစ်ကြာလို့ သူ ပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ သူဟာ ရှေ့နေတစ်ယောက် ဖြစ်လို့နေပါပြီ။
ကဲ ဒါဆိုရင် ဆောဂျင်ဝူးတစ်ယောက် တစ်ဦးတည်းသော မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ အဖေဖြစ်သူမှာ အပြစ်မရှိကြောင်း သက်သေပြနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ကြိုးစားသွားမလဲ၊သူ့အဖေကို ထောင်ထဲ ပို့ခဲ့တဲ့ ငွေရှင်ကြေးရှင် လူသတ်သမားကိုရော ဘယ်လို လက်တုံ့ပြန်သွားမလဲ၊သူ့ကို ကူညီပေးမယ့် အင်အာကရော ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို ဆက်လက် ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြပါဦးနော်။
အဓိကမင်းသားအဖြစ် ” I’m notarobot ” ကားထဲက နာမည်ကျော်မင်းသား Yoo Seung Ho နဲ့ မင်းသမီးကတော့ အားလုံးက ကင်နာနာ၊ဂင်မီဆိုလို့ လူသိများကြတဲ့ Park Min Young ပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အတွဲညီညီ ပေါင်းစပ်မှုကနေ
ခါတိုင်းလို ro တလိုင်းကနေ ခွဲထွက်ပြီး အရမ်း ဖီးလ်ရမယ့်ကားလေးမို့ စိတ်ကြိုက် တွေ့စေမှာပါဆိုတာ အပြည့်အဝ အာမခံပါတယ်နော်။
Encoded by Shwim Shwim
Translated by Aye Phyu Thin
Original title 리멤버
First air date Dec. 09, 2015
Last air date Feb. 18, 2016
latyarDecember 9, 2018Reply
where is the download buttom???
Kaung Min SetDecember 9, 2018Reply
Pan Ei PhyuDecember 14, 2018Reply
AMKDecember 19, 2018Reply
Can’t download from 5
Kyaw Ye AungDecember 30, 2018Reply
Link လေတွေ လုပ်ပေးပါအုံး
snowJanuary 3, 2019Reply
moon lover နဲ့ moon light လေးပြန်တင်ပေးပါ Pls
Kaung HtutJanuary 8, 2019Reply
အပိုင်း11ကနေ နောက်ဆုံးအပိုင်းဒေ ပြန်တင်ပေးပါဦး Admin
heinJanuary 10, 2019Reply
Kaung HtutJanuary 11, 2019Reply
admin ရေ အပိုင်း11ကနေ နောက်ဆုံးထိ အပိုင်းတေပြန်တင်ပေးပါအူး
Latt Wae ThonJanuary 12, 2019Reply
Admin ရေ ကြည့်ချင်နေပြီလို့ တင်ပေးဦးနော်
remcylnnJanuary 14, 2019Reply
Latt Wae ThonJanuary 15, 2019Reply
ကျေးဇုးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ် နောက်ထပ်လဲ ပေးဦးနော်
soe naingJanuary 22, 2019Reply
PaingsoeJanuary 28, 2019Reply
၁၅ က​နေ​နောက်ပိုးင်း​လေး ​တွေတင်ပါဦး
Myat Min ThuJanuary 29, 2019Reply
15 to 20 down မရလို့ link ပြန်ပြင်ပေးပါ Admin Please
Soe Moe MonJanuary 30, 2019Reply
15 to 20 ဆက်တင်ပေးပါ
JuliaJanuary 31, 2019Reply
အပိုင်း၁၅ တင်ပေးပါ Admin pls
Latt War ThonFebruary 1, 2019Reply
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် GC Family
Remember စီးရီး အပိုင်း ၁ ကနေ ၁၅ အထိ ရပါပြီ။
၁၆ ကနေ ၂၀ အထိ ဆက်တင်ပေးပါဦးနော်။
AMMFebruary 10, 2019Reply
Please Admin, Ep. 17 to 20 ထိ တင်ပေးပါအုံးနော် ကျေးဇူးပါ ?
MgBravoFebruary 11, 2019Reply
၁၇၊ ၁၈ ရနေပါပြီ။
ထပ်တင်ပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ LOVE U
Htet Wai Yan AungFebruary 13, 2019Reply
19, 20 တင်ပေးဦး
Latt War ThonFebruary 20, 2019Reply
ကျေးဇူးပါနော် နောက်ထပ်နောက်ထပ်လဲ ဇာတ်ကားကောင်းတွေအများကြီး ဖန်တီးပေးနိုင်ပါစေ
kz winMarch 31, 2019Reply
thanks admin for sharing good movies
RadanarOctober 8, 2019Reply
Plz refresh link.